Balance Accounting and Business Services in Mandalay
ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများ ရေးဆွဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
Balance Professional Services မှ တိကျမှန်ကန်၍ လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်း စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည့်၊ မိမိ လုပ်ငန်း၏ ပကတိအခြေအနေကို သိစေမည့် Financial Statements များရေးဆွဲပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Financial Statements ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သိရှိနိုင်ရန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Financial Statement ဆိုတာဘာတွေလဲ?
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆို အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတိုင်း Financial Statements ခေါ် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများ ရေးဆွဲပြီး လုပ်ငန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်ကြရသည်။ ရေးဆွဲလေ့ရှိသော Financial Statements များမှာ
• Cashflow Statement (လုပ်ငန်းငွေလည်ပတ်မှု အစီရင်ခံစာ)
• Profit & Loss Statement/ Income Statement (လုပ်ငန်းအရှုံးအမြတ်စာရင်း အစီရင်ခံစာ)
• Trial Balance (လုပ်ငန်း အစမ်းရှင်းတမ်း)
• Balance Sheet (လုပ်ငန်း လက်ကျန်ရှင်းတမ်း)
• Statement of Changes in Equity (အစုရှယ်ယာခွဲဝေမှုများ ပြောင်းလဲမှုရှင်းတမ်း) တို့ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Financial Statement များကို အချို့က တစ်လတစ်ခါရေးဆွဲပြီး အချို့က ၃ လ တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) ၆ လ တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ရေးဆွဲလေ့ရှိကြသည်။ အချို့မှာ ပုံမှန်ရေးဆွဲခြင်းမျိုးမရှိပဲ ရှယ်ယာ ခွဲဝေချိန်၊ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းချိန်/လက်လွှဲရောင်းချချိန် နှင့် ဘဏ်ချေးငွေလျှောက်ရန် အချိန် စသည့် အထူးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်သည့်အချိန်တွင်ရေးဆွဲကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အခြေအနေမှန်ကို သိရှိရန် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အဆိုပါ Financial Statements များကို တစ်ချိန်ချိန်တွင်တော့ မလွဲမသွေရေးဆွဲကြရသည်။
ဘာလို့ Financial Statement တွေ ရေးဆွဲသင့်သလဲ?
Financial Statement ဆိုတာကတော့ စီးပွားရေးတိုင်းမှာရှိရမယ့်ဟာတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အချို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းလုပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ မိရိုးဖလာရိုးရာနည်းနဲ့ လည်ပတ်တဲ့လုပ်ငန်းများကတော့ မဆွဲတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးကြီးသေးသေး
• အရှုံးအမြတ်မပေါ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်/အရှုံးအမြတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• လုပ်ငန်းရဲ့ငွေယိုပေါက်တွေကို သိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ စီစဥ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• မိမိ လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို သိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်း စနစ်ကျချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• Financial Planning/ Budge Planningဆွဲချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• ရှယ်ယာရှင်များကို အမြတ်ခွဲပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
• ရှယ်ယာရှင်ကို အမ်းထုတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
သက်ဆိုင်ရာ Financial Statement တွေကိုရေးဆွဲကြပါတယ်။
ဘာလို့ Balance Services ကို Financial Statement တွေ ရေးဆွဲခိုင်းသင့်သလဲ?
Financial Statement များရေးဆွဲကြသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်ကောင်စီမှထုတ်ပြန်ထားသော Myanmar Financial Reporting Standards (မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ စံနှုန်းများ) (သို့မဟုတ်) International Financial Reporting Standards (နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ စံနှုန်းများ) နှင့်အညီ ရေးဆွဲကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Balance Professional Service မှလည်း အဆိုပါ လူကြီးမင်းလိုအပ်သော Financial Statements များကို ရေးဆွဲရာတွင် လုပ်ငန်း ကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ စာရင်းကိုင်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ရေးဆွဲကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ Financial Statements များရေးဆွဲပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများကို အခြေပြု၍ တပါတည်း
• အသေးစိတ် ၅ ကျပ် ၁၀ မှမလွဲရလေအောင် ဂရုစိုက်ပေးခြင်း
• လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
• စာရင်းဇယားပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
• လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Accounting System ၏လိုအပ်ချက်များကိုထောက်ပြခြင်း
• ပုံမှန်မဟုတ်သော တွေ့ရှိချက်များကို တင်ပြခြင်း
• စာရင်းကိုင်စံနှုန်းဖြင့် မညီသောအချက်များအား ထောက်ပြခြင်း
• ယခင်နှစ်များနှင့် နှိုင်းယှဥ်၍ Consolidated Financial Statements များဆွဲပေးခြင်း
• Graphical/Visual Report / သတင်းအချက်အလက်ပြည့်စုံသော၊ နားလည်လွယ်သော ပုံကားချက်များဖြင့် ဖော်ပြပေးခြင်း စသဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများသည် လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်သော Financial Statement အမျိုးအစားများနှင့် အခြား Value Added Service များအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
လူကြီးမင်း အနေဖြင့် မည်သည့် Financial Statements သည် လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် Balance Professional Services မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ရန် ယခုပဲ ဖုန်းနံပါတ် 09-966-118-536 သို့ဆက်သွယ်၍ ရက်ချိန်းရယူလိုက်ပါ။
- Balance Professional Services